ISilo noNdlunkulu bashiye umcimbi wabo 'isigubhukane - Ilanga News
Home Izindaba ISilo noNdlunkulu bashiye umcimbi wabo ‘isigubhukane
ISilo noNdlunkulu bashiye umcimbi wabo ‘isigubhukane
Izihambeli zisale zididekile ngembangela yokuhamba kwabo
JOHN HLONGWA noSKHOSIPHI MTHEMBU
SIPHUME sesikhashwa ngonogada iSilo uMisuzulu emcimbini waso noNdlunkulu uNtokozo Zulu, uKaMayisela ngoMgqibelo, eNewcastle, obulandela umembeso nomkhehlo obusemini KwaMayisela. Izihambeli zisale zinkemile nekhekhe lasala lingasikwanga njengoba bekulindelekile. Umcimbi uqale kahle izihambeli zigcwele ngaphakathi, kungekho ngisho indawo yokuhlala kangangoba ezinye izihambeli bezimi ngezinyawo ngalapho kungenwa khona etendeni.
Kuthe umcimbi usaqhubeka, izikhulumi zishintshana zibongela iSilo noNdlukulu ngomcimbi wabo obumuhle, kwabonakala uMnu Thulani Nkwanyana oyinyanga eguqa lapho bekuhleli khona iSilo noNdlunkulu, wabe esesihlebela okuthize emva kwalokho kwabonakala iSilo sesisukuma sikhashwa ngonogada, omunye wabo obehamba phambili egudluza abantu ephethe isibhamu, kubonakala ukuthi kuyaphuthunywa. Emva kwaso bekulandela uKaMayisela naye ehamba nonogada, bafakwe ezimotweni zaphuma zigijima lapho bekubanjelwe khona lo mcimbi.
Kwenzeka konke lokhu nje, uMntwana uThulani Zulu okunguyena obephethe uhlelo, ubesememezelile ukuthi uma kuqeda izikhulumi, iSilo noNdlunkulu bazosukuma basike ikhekhe bese kwenziwa i-toast. Konke lokho kugcine kungenzekanga kwaphoqa ukuthi ikhekhe lisale kanjalo lingasasikwanga, nezihambeli zasala zimangele. ILANGA lihabule ngemithombo yalo ukuthi iSilo siphume nonogada nje, bekunezinsolo zokungaphephi kwaso, okuyikho okuphoqe ukuba sishiye umcimbi waso noNdlunkulu ungakapheli.
Omunye umthombo ongaphakathi ubuzwa yileli phephandaba ngokubalekiswa kweSilo noNdlunkulu, uthe kungenxa yokungaphephi kweSilo (security threats). Izihambeli ezisale ngaphakathi, ziqhubekile nokudla kwadlalwa nomculo. Emuva kwemizuzu engabalelwa kwewu-30 uMntwana uThulani umemezele ukuthi umcimbi usufike emaphethelweni, wabiza obezodlulisa amazwi okubonga. Ethintwa uMntwana uThulani ngalokhu, uvumile ukuthi iSilo sihambe umcimbi ungakapheli.
Mayelana nokuthi iSilo sihanjiswe yindaba ephathelene nokuphepha kwaso, uthe akanalo ulwazi ngalokho kodwa usazolandelela ezwe ukuthi kwenzekeni.“Bekungelula ukuthi ngibone konke obekwenzeka njengoba bengiphethe uhlelo. Nami ngibone ezihlalweni kungasekho muntu, ngazitshela ukuthi mhlawumbe iSilo siyabuya. Engikuqaphelile nje ukuhlupha kukagesi njengoba uvele wacima kodwa ngisazolandelela, ngizwe ukuthi bekwenzenjani,” kusho uMnu Nkwanyana. ILANGA lithinta uMnu Nkwanyana, ukuqinisekisile ukuthi kukhona akukhulume neSilo “okubalulekile.
Previous articleIsiphepho sidlule nemiphefumulo eBulwer
Next articleObaliwa ushise umuzi wentombi nezingane (2)